Maitiro ekudzima mukati-app kutenga pane iyo iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekudzima mu-app-kutenga kutenga kubva kumaapp
Zvimwe zvikumbiro zvinotipa mukana wekuwana kumwe kuvandudzwa nekutenga mukati mekushandisa. Ivo vanozivikanwa sekubatanidza kutenga kana kutenga-mukati-app Uye, sekufanana nezvimwe zvese, ivo vane avo akanaka mapoinzi uye avo akashata mapoinzi. Sechimwe chinhu chakanaka tinogona kupa muenzaniso watinogona wana zvemukati zvakagadziridzwa kunyorera. Sechinhu chisina kunaka, uye iyi ndiyo yakawanda, kutaura kuti nekutenga uku tinongowana mukana wekutamba kumirira nguva shoma, kubvisa kushambadzira kana, kudzokera kumitambo, kugadzirisa hunhu hwedu kuti tifambire mberi. Chinhu chakashata mune idzi kesi hakusi kutenga pachako, asi chikonzero nei vachiwedzerwa.
Kana isu tiri vakuru uye tichiziva zvatiri kuita, hapana dambudziko asi, kana tikasiira mudziyo wedu kumwana, zvinokwanisika kuti isu tichawana kubhadhariswa pakadhi redu rechikwereti nezvekutenga izvo zvataifunga kuti hatina kuita. Kunyangwe Apple inogona kupindura mushe uye "kuregerera" chikwereti (pakave nezviitiko), zvakanakisa chenjera uye dzima mukati me-app kutenga. Kuti tiite izvi, tichaita zvinotevera:
Maitiro ekudzima mukati-app kutenga pane iOS
Isu tinoenda kuZvirongwa / General / Kurambidzwa.
Isu tinoshandisa izvo zvinorambidzwa uye tinopinda kodhi (dai isu tisina kuzviita zvisati zvaitika) kaviri, kamwe kuti tigadzirise uye kamwe kuti tione.
Kamwe zvirambidzo zvikaitwa, isu tinodongorera pasi uye toomesa Yakabatanidzwa Kutenga.
Kana iwe uchiwanzo siya yako iOS chishandiso kuvana, Iwe unofanirwa kumisa iyi mhando yekudzivirira. Nekumisa zvakabatanidzwa kutenga tiri kuve nechokwadi chekuti nhengo diki dzemhuri hadzitenge kukwidziridza mapakeji mumitambo yavo yavanofarira iyo inozobhadhariswa kukadhi redu rechikwereti. Iwe unogona kushamiswa nekugona kweava vadiki kudzidza kunyangwe nekutarisa pane zvatinonyora.
Kana tikaisa kiyi pamberi pavo, vanogona kudzidza uye voishandisa kutamba zvirinani. Kana tikabvisa zvinhu zvakabatanidzwa hatina njodzi kuti ivo "vanorasikirwa nemunwe" uye voita zvimwe "zvakashata."
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima mu-app-kutenga kutenga kubva kumaapp
Jimmy R akadaro
Warevesa chaizvo, mwanasikana wangu akatenga $ 2 app nekuti aona app yacho ichisekesa.
Pindura Jimmy R
Nguva nenguva pane posvo yekufarira kukuru seichi uye kuva kuti zvinosuwisa kuti nzira yeIAP ndiyo iri kuwana zvakanyanya pakati pevakagadzira maapps bhatani iri isu tinofanirwa kumisikidza zvese patinenge tichigadzira kwekutanga kurongedzwa kweIOS. mudziyo uri kutaurwa.
Izvo zvisingazivikanwe nevanhu vazhinji ndezvekuti kana iwe ukatenga chimwe chinhu pasi pemaitiro aya sekutumira kwazviri kuti hauna chaunobhadhara, izvi zvazvinoreva ndezvekuti izvo zvauri kuzowana zviripo zviripo pachigadzirwa chako pawakadhinda iyo application, Chinhu chega chaunoita kana uchibhadhara ndechekuchizarura, mune mamwe mazwi kana iwe ukazvipira iwe kurodha mahara maapplication anoshandisa nzira yeIAP uye usapfuure nebhokisi gare gare uri kushandisa pasi pechinhu chako mudziyo nekuti uri kutora pamusoro nemaapplication aunoshandisa hafu asi kuti iwo ane zvizere zvizere, ndiyo imwe huru asi yeiyi nzira yekutengesa, chekutanga chiri pachena kubuda ropa kwavakaita.
Icho chokwadi chekuti kune kwese kwese kunoshanda kune zvakwakanakira asi maringe nehukuru hwacho, zvakaitika kwatiri tese apo maapplication akagadziridzwa kune retina skrini yakatanga kuoneka uye kana tichida kuve neazvino maficha isu tinofanirwa kurodha pasi yazvino vhezheni kana iko kukura kwehukuru kwainyanya kuve nekuda kwechidzitiro icho chisiri wese munhu chaaida, ichi chimwe chinhu chakafanana.
Pindura kuna Lalodois
ndatenda Bro mandiponesa hehehe !!!! XD
Google Mepu yeIOS inounza nzira nyowani yeusiku
Aya ndiwo maonero edu pane iOS 9 Beta 5